प्रवल गुरुङको प्रश्न: अमेरिका कसको हो ? - USNEPALNEWS.COM
प्रवल गुरुङको प्रश्न: अमेरिका कसको हो ?
फूलको ताज र सुन्दरी प्रतियोगितामा प्रयोग हुने स्यासहरुमार्फत् प्रवल गुरुङले एउटा आधारभूत प्रश्न सोधेका छन् ः अमेरिकी हुन पाउने अधिकार कस कसलाई छ ?
‘टी–सर्ट र जिन्सबीच एउटा व्यवहारिकता देखिन्छ । साँझको पहिरनमा काल्पनिक र सुन्दर आकर्षण हुन्छ,’ गुरुङले भने ,‘ म यी पक्षलाई जोड्न चाहन्थे र त्यसमार्फत प्रश्न गर्न चाहन्थे –यो देश कसको हो ?